Tattooga laanta saytuunka iyo macnahooda | Tattoo
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo mid ka mid ah naqshadaha taatikada ee aan inta badan u aqoonsanno a calaamadda nabadda ama guusha, astaamaha laanta saytuunka. Waana taas, waan hubaa, in dadka intiisa badani, markay jeclaadaan laan saytuun ah oo keligiis ah ama qoolley wadato, waxaan si dhakhso leh ugula jaanqaadi doonnaa labadan xaqiiqo: helitaanka guul ama nabad.
Sidaa darteed, tan maqaalka waxaan ku milicsan doonnaa macnaha tattoos laanta saytuunka. Intaa waxaa dheer, waxaan ku siin doonnaa fikrado fara badan si taatuugaaga laanta saytuunka uu u noqdo mid asli ah oo qabow intii suurtagal ah.
1 Micnaha geedo saytuun ah
1.1 Geedo saytuun ah oo ku yaal Giriiggii hore
1.2 Geedka saytuunka oo astaan ​​u ah nabadda
2 Fikradaha tattoo laanta saytuunka
2.1 Laan saytuun ah oo leh dheeman iyo taaj
2.2 Geed saytuun ah oo dhinaca ah
2.3 Taaj guul
2.4 Laamihii saytuunka oo la isku daray
2.5 Qoolley leh laamo
2.6 Geed saytuun ah iyo tattoo qoolley
2.7 Tattoo laan macquul ah
3 Sawirrada Tattoos Laanta Olive
Micnaha geedo saytuun ah
Micnaha geedaha saytuunka waxay hodan ku yihiin sida dhaqanka Mediterranean ee uu ka yimaado iyo, weliba, wuxuu si xoog leh ugu xididaysan yahay Griiga, sida aan hoos ku arki doonno.
Geedo saytuun ah oo ku yaal Giriiggii hore
Dhaqammo badan ayaa geedka saytuunka ah, sida geed, wuxuu leeyahay doorar badan oo muhiim ah. Waana inay tahay nooc ka mid ah awooda inuu noolaado in ka badan boqol sano. Dhinaca kale, oo haddaan ku sii dhex milicsanno dhaqammadii hore, waxaan aragnaa in Giriiggii hore geedka saytuunka loo tixgeliyey inuu yahay geed muqaddas ah. Sidii aan horay u soo sheegnayba, waxay astaan ​​u ahayd guul, in kasta oo ay iyaduna la xidhiidhay sharaf.
Wixii Giriigga ah ee xigmadda Greek, Athena, sida ku xusan sheekooyinka, wuxuu siiyay ragga laamo saytuun ah markay gaaraan guulo muhiim ah goobta dagaalka ama meelaha kale.
Haddii aad ogaato, kiiskan macnaha geedka saytuunka ayaa juqraafi ahaan aad ugu xaddidan badda dhexe (horeyba Giriiggii hore), maadaama uu yahay geed asalkiisu asal ahaan yahay xeebta badaan (in kasta oo sidoo kale laga heli karo meelo cayiman oo Aasiya iyo Afrika ah). Taasi waa sababta halyeeyo badan oo ku saabsan astaamaheeda ay ula xiriiraan qaybtaan adduunka ka mid ah.
Tusaale ahaan, halyeey kale ayaa sheeganaya in kumanaan sano ka hor, saytuun badan ay ku dhaceen biyaha badda dhexe. Goor dambe, waxay dul sabbeeyeen xeebta Griiga, halkaas oo laga helay oo laga cunay. Oo iyagu aad bay u jeclaayeen iyaga oo xataa maanta loo tixgeliyo inay yihiin cunno macaan. Tani waxay u badan tahay sababta loogu tiriyo geedo la xiriira nasiib wanaag iyo hanti.
Sidoo kale Griiga waxaa jira hadal ku saabsan dhaqan soo jireen ah, in la beero geed saytuun ah markuu ilmuhu dhasho, xusuusin nololeed: geedka saytuunka ahi wuxuu ku dambayn doonaa inuu ka sarreeyo ilmaha dhererkiisa oo cimri dheeri ah.
Geedka saytuunka oo astaan ​​u ah nabadda
Si kastaba ha ahaatee, laanta saytuunka haddii si fiican loo yaqaan maanta waa sababta oo ah waxaan u aragnaa inay astaan ​​u tahay nabadda.
Xaqiiqdii halyeeygii asalka ahaa ee calaamaddan caalamiga ah ayaa kuu muuqda adigu adigu adigu waad ogtahay: Kitaabka Quduuska ah, daadadka guud ka dib, Nuux wuxuu sii daayay qoolley si uu dhul u raadiyo. Qoolleydu, maalmo badan ka dib, waxay ku soo noqotaa doonnida iyadoo leh laan saytuun ah afkeeda. Sidaa darteed, geedka saytuunka ah ma aha oo kaliya inuu baahiyo nabadda, laakiin sidoo kale rajo.
Fikradaha tattoo laanta saytuunka
Sida naqshad tattoo ah, laanta saytuunka waa wax xiiso leh. Iyo, iyadoo kuxiran sida loo sawiray, waxaan helnaa cunsur dabeecad yar oo xarago leh. Kaliya waa inaad fiirisaa qolka lebbaarta ee laanta saytuunka ee hoose si aad u aragto soo jeedimaha qaar ee dabeecaddan. Laan yar, ganaax iyo xarrago leh oo saytuun ah ayaa si weyn ugu muuqda ku dhowaad meel kasta oo jirka ka mid ah.
Markaas ayaan ku siin doonaa xoogaa fikrado ah waxaan rajeyneynaa inaad sidoo kale xiiso u yeelatid.
Laan saytuun ah oo leh dheeman iyo taaj
Kahor intaanan dhihin in laamaha saytuunka loo isticmaalay inay astaan ​​u yihiin guusha Athena ay siisay (si la mid ah laurel ubaxyada). Qaabkan, Tattoo-ga ayaa lagu dhiirrigeliyay astaantan wuxuuna ku xoojinayaa dheeman iyo taaj (waqtigan ayaa ka sii caansan). Khadadka adag waxay xoojinayaan qaab dhaqameed kuu eg adiga.
Geed saytuun ah oo dhinaca ah
Kaliya maahan inaan ku dhiirrigelin karno laanta saytuunka ee tattoo-geena, geedka oo dhan sidoo kale waa ikhtiyaar aad u qabow kara Qaabka dartiis, waxay si gaar ah ugu egtahay dhinaca. Waxay ku xoojineysaa muuqaalka geedka saytuunka midabka cagaarka ah ee caleenta iyo jirriddiisa iyo laamahiisa dillaacsan.
Taajyada guusha shaki la’aan waa mid ka mid ah naqshadaha xiddigaha marka la kala dooranayo astaamaha laanta saytuunka. Marka laga soo tago inay leeyihiin macno aad u cad, waxay u muuqdaan kuwo qaabab badan oo kala duwan leh, laga soo bilaabo tan dhaqameed, oo ay weheliyaan waxyaabo kale ... Xaaladdan oo kale, qaab fudud ayaa loo doortay oo midhaha geedka saytuunka ah lagu daray ka dhig mid lagu aqoonsan karo aragtida koowaad.
Maskaxda ku hay in inkasta oo ay jiraan dhawr nooc oo kala duwan oo saytuun ah, oo ay ku jiraan kuwa cagaaran, in tattoo ah guduud ama madow ayaa ka fiican in la siiyo wax yar oo ka soo horjeedda midabka.
Laamihii saytuunka oo la isku daray
Tattoo-yada laanta saytuunka waxay ka koobnaan karaan hal gabal, laakiin cabir ahaan sidoo kale waa mid aad u wanaagsan in lala socdo naqshadaha kale. Xaaladdan oo kale, laamaha geedkani waa cunsur kale oo wehel u ah oo ka muuqda naqshadda weyn, geedaha firka qaarkood.
Qoolley leh laamo
Astaanta nabadda heer sare. Waxaan horey uga soo hadalnay macnaheeda. Waa maxay tattoo, waxay si aad ah ugu shaqeysaa naqshadaha aadka u faahfaahsan ee dhabta ah iyo waliba kuwa badan oo la taaban karo (tusaale ahaan, taabashada midabbada biyaha), iyo sidoo kale kuwa ka fudud, madow iyo caddaan ah. Shaki la'aan waa naqshad guud oo caalami ah.
Geed saytuun ah iyo tattoo qoolley
Haddii aad rabto inaad isku darto laba astaamood oo aad u xoog badan, dooro naqshad isku dhafan geedka saytuunka iyo qoolleyda. Waxaa muhiim ah in geedka saytuunka uu yahay geed leh jirrid goraysan oo qaloocsan, mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn, qoolleyduna waa caddaan (ama in si fudud loo qeexo haddii ay madow iyo caddaan tahay). Haddii aad rabto inaad xoojiso fikradda nabadda, waxaad ku dhex ridi kartaa laamo afkeeda.
Tattoo laan macquul ah
Dhiirigelin weyn oo lagu helo tattoo laanta saytuunka oo leh taabasho macquul ah waa in lagu dhiirrigeliyaa sawirro hore oo ka yimid buugaagta dabeecadda sida tan. U fiirso sida caleemaha ay ugu muuqdaan kuwo jilicsan iyo qaababka kala duwan ee noocyada kala duwan. Waa hab ku habboon in lagu metelo cimilada kulul ee badda Mediterranean iyadoo la muujinayo mid ka mid ah geedaheeda caadiga ah.
Waxaan rajeyneynaa in qodobkan oo leh macnaha taatikada laanta saytuunka, oo ay weheliyaan fikrado qaar si naqshadeyntaadu u noqoto mid gaar ah, waad jeclaatay oo xiiseyneysay. Noo sheeg, ma haysaa wax tattoos ah oo leh geedkan dabeecadda ugu weyn? Waa maxay macnaha aad jeceshahay? Miyaad u maleyneysaa inaan ku guuldareysanay inaan xusno midna? Xusuusnow inaad nooga tagi kartid faallo!
Sawirrada Tattoos Laanta Olive
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo tattoo laanta saytuunka, calaamadda nabadda ama guusha